Inguqulelo entsha yeLinux Mint 19.1 Tessa sele ikhutshiwe | Ubunlog
Inguqulelo entsha yeLinux Mint 19.1 Tessa sele ikhutshiwe
Kutshanje sNdathetha apha kwibhlog malunga neLinux Mint 19.1 Tessa beta release (emva kwexesha elincinci) Kwaye ngoku abafana baseLinux Mint bathathe isigqibo sokuqhubela phambili isipho kulindeleke ngeentsuku zekrisimesi.
Kwaye sinokuthi iLinux Mint 19.1 Tessa ilapha kunye nathi kwaye abaphuhlisi beLinux Mint bonwabile ukwazisa ngokusungulwa kwayo ngokusemthethweni.
1 I-Linux Mint 19.1 Innovations ePhezulu (MATE, Cinnamon, Xfce)
2 Izinto eziphambili ezenziwa ngokutsha kwenkqubo
3 Khuphela iLinux Mint 19.1
I-Linux Mint 19.1 Innovations ePhezulu (MATE, Cinnamon, Xfce)
Ukwenziwa ibandakanya iinguqulelo zemeko bume yedesktop kaMATE 1.20 (Ukukhululwa okufanayo kuhanjiswe kwiLinux Mint 19.0).
Inguqulelo entsha yeCinnamon 4.0 ibonisa ubume bebar yomsebenzi apho iphaneli iye yaba nkulu kwaye yaba mnyama, endaweni yamaqhosha anamagama eefestile, ngoku ii icon zibonisiwe kwaye iiwindow zihlelwe.
Kubathandi bokuyilwa apha ngasentla, ifayile ye- ukhetho lokubuyela ngokukhawuleza kuhlobo lwangaphambili lwepaneli Yongezwe kwi-interface eyamkelekileyo yokungena.
Endaweni yoluhlu lwendabuko lweefestile kunye nezixhobo ezizinzileyo, iapplet fork "Icing Task Manager" idityaniswe kwipaneli, idibanisa uluhlu lweefestile ezivulekileyo kunye nethuba lokubeka ii-icon zezicelo ezihlanganisiweyo (njengakwi-sidebar Ubuntu).
Xa ujikeleza ngaphezulu kwe icon, umsebenzi wokujonga umxholo wefestile ubizwa.
Kwisimo se-configurator, ungabutshintsha ububanzi bepaneli kunye nobungakanani beempawu zeempawu ngasekhohlo, embindini nakwindawo ezisekunene zepaneli.
Umsebenzi womphathi wefayile yeNemo wakhawulezisa kakhulu (ukunciphisa ixesha lokuqalisa, ukukhawulezisa ukulayisha isantya somxholo wolawulo, inkqubo yokukhangela ye icon).
Ukongeza ubungakanani beempawu zeempendulo kunye neempendulo zaguqulwa. Yongeza iqhosha ukwenza / ukukhubaza ukuboniswa kwe-thumbnail.
Umboniso wexesha lokudala ifayile. I-Nemo-python kunye nazo zonke izongezo kwiNemo, ebhalwe kwiPython, ifakwe kwiPython 3.
Ujongano kunye noseto lwe desktop kunye nomphathi wefayile utshintshiwe.
Izinto eziphambili ezenziwa ngokutsha kwenkqubo
Kulo hlaziya umphathi wokufaka, wongeze uluhlu lokuhlaziywa kwephakheji kunye neLinux kernel kunye nenqanaba lenkxaso yakho kulwabiwo.
Utshintshe ujongano lwesicelo ukukhetha imithombo yokufakwa kwesoftware (imithombo yesoftware). Uhlelo lokusebenza longeze i-tab entsha "Yesondlo" ngezixhobo zokususa iikopi eziphindiweyo.
Indlela yokhetho yokhetho olwenziweyo yenziwe ngokutsha: itab eyahlukileyo enoseto ngoku ibonisiwe kwibar esecaleni kulwimi ngalunye olukhethiweyo. Inkxaso eyongeziweyo yenkqubo yokufaka yeFcitx.
Ukuqhubekeka nokuphuculwa kwezicelo eziphuhliswe njengenxalenye yephulo le-X-Apps, ejolise ekudibaniseni imeko-bume yesoftware kuhlelo olwahlukileyo olusekwe kwidesktop yeLinux Mint.
Kwi-X-Apps, kusetyenziswa iitekhnoloji zale mihla (I-GTK3 yokuhambelana kwe-HiDPI, i-gsettings, njl. Njl.), Kodwa izinto zonxibelelwano zesiko ezinje ngeebar zesixhobo kunye neemenyu ziyagcinwa.
Phakathi kwezi zicelo: Umhleli wombhalo weXed, Umphathi wePix Photo, Isidlali semidiya seXplayer, umbonisi woxwebhu lweXreader, umbonisi womfanekiso weXviewer.
Kumvavanyi woxwebhu lweXreader (isebe leAtril / Evince), ujongano lwenziwe lwalunga, izithonjana kunye nemida icacisiwe gca.
Umhleli wombhalo we-Xed (isebe lePluma / Gedit) liguqulelwe ukusebenzisa ilayibrari ye-libpeas, iPython 3, kunye nenkqubo yokwakha kaMeson.
Kwilayibrari ye-libxapp, eyalela izinto eziqhelekileyo zomdibaniso, zongezwa iwijethi entsha:
I-XAppStackSidebar (ipaneli esecaleni ye icon)
XAppPreferencesWindow (uqwalaselo oluninzi)
XAppIconChooserDialog (Incoko yababini yoKhetho lweCon)
I-XAppIconChooserButton (iqhosha likwimo yeempawu okanye imifanekiso)
Khuphela iLinux Mint 19.1
Ukukhuphela iifayile ze-ISO zeencasa ezahlukeneyo zolu hlelo lutsha lweLinux Mint 19.1, unokuzikhuphela ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi esemthethweni yeprojekthi.
Ngaphandle kokuqhubeka, ukuba ufuna ukubanakho ukuzama le nguqulo intsha yeLinux Mint, sele sinazo amakhonkco okhuphelo asesandleni kwaye kufuneka ufake kuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Linux mint » Inguqulelo entsha yeLinux Mint 19.1 Tessa sele ikhutshiwe
Ngokwenene ndingathanda ukwenza ukutsiba ukusuka ku-Ubuntu kuye kwi-Mint, ngokusebenza ngaphezulu kwayo nantoni na kwidesktop, into endiyigxekayo kakhulu ku-Ubuntu yi-Gnome kunye nokusikelwa umda kwayo ukwenza ii-shorcuts kunye nokongeza iifolda kwidesktop kwaye kufuneka ukwenze oko kuthetha ukuba Ukufakela ii-addons ukuze ndikwazi ... Ndicinga ukuba uyayiqonda into endiyithethayo kwaye uyazisola ngendlela yam yokubonisa, kodwa ndivela kwihlabathi leWindows kwaye izinto ezininzi kum zixhaphakile kwiWindows ezinje ngeemenyu zomxholo, iindlela ezimfutshane kunye nezinye izinto. Andinayo imvelaphi yeGnome kwaye loo nto kinda iyandiphazamisa, emva koko Ubuntu busebenza njengesilika.
Ukuphela kwempazamo endinayo kukuba amaxesha endifuna ukufaka iMint, ndifumana impazamo ye-UEFI, i-UEFI eyaziwayo endandingazi nokuba ilaptop yam inayo. Ndizamile iindlela ezahlukeneyo zokufikelela kwi-BIOS yomatshini ukuwenza ungasebenzi kwaye khange ndikwazi. kwaye ndilandele isifundo andazi ukuba kweli phepha okanye kwelinye elifana kakhulu malunga nendlela yokuyikhupha kwaye into endiyiphumeleleyo kukuba igama elithi GRUB livele kum liphindaphinda ngokungapheliyo, kwi-loop engapheliyo engapheliyo Ndicime ilaptop ngokukhawuleza ukuze ndiyiphazamise.
Yeyona nto kuphela endithintelayo ekufakweni kwe-MINT (kuyo nayiphi na imeko i-MINT ifakwe ngokuchanekileyo kwidiski enzima) kodwa i-UEFI edumileyo iyandithintela ekufikeleleni kuyo.
Ngendlela, ilaptop yam yiToshiba Satellite P55t-A5116, sele isetyenzisiwe phantse iminyaka emi-4 kwaye isebenza ngokugqibeleleyo.
Le yenye yezifundo endizilandeleyo kunye nenye eneziphumo ezibi kwimeko yam
Umbhali ngumhlobo wendlu… 🙂
Teleport isicelo sokwabelana ngeefayile ekuhlaleni
UPitivi umhleli wevidiyo ngokudityaniswa okuhle eGnome